တောင်ကိုရီးယား sverhurabnizirovannoy လူဦးရေတိုင်းပြည်စဉ်းစားထို့ကြောင့်မြေယာအဖုံးပေါ်တွင်သာ 3,82 စတုရန်းမီတာဧရိယာဒေသများကာကွယ်ထားသည်။ ကီလိုမီတာနှင့်ပင်လယ် - 2,64 စတုရန်းမိုင်။ ကီလိုမီတာ။ ဒီဧရိယာအတွက်ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားဧည့်သဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်သိုက်တို့ဖြစ်ကြသည်။
တောင်ကိုရီးယားမှာအားလုံးနီးပါးပန်းခြံ XX ရာစု 70-ies ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ တိုင်းပြည်အတွက်ခရိုင်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဟုခေါ်တွင်သော 20 ကြီးမားသောနှင့်များစွာသောအသေးစားသိုက် (50), ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများတောင်တို့နှင့်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဆုံးစွန်သောပုံတို့ပါဝင်သည် ကျွန်း နှင့်သူတို့စပ်ကြားရေကိုအာကာသ။
ကိုရီးယားတွင်အများအပြားပန်းခြံများ၏နယ်မြေတွင်, သဘာဝအပြင် ဆွဲဆောင်မှု , သင်၏အထိမ်းအမှတတွေ့နိုင်ပါသည် ယဉ်ကျေးမှု နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်း ။ တိုင်းပြည်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်သောအရံများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နိုင်ငံတော်ကုမ္ပဏီမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
ကိုရီးယားအမျိုးသားပန်းခြံမှဝင်ပေါက်များသောအားဖြင့်ပေးဆောင်ပေမယ့်စျေးနှုန်းအနိမ့်သည်။ နှင့်ယာဉ်ရပ်နားများအတွက်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးဝင်ငွေ protected ဒေသများ၏တိုးတက်မှုမှတတ်၏။ အဆိုပါအရံတစ်ဦးခရီးစဉ်အတွင်းခရီးသွားဧည့်အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရပါမည်။ ဒါဟာရန်တားမြစ်ထားသည်:
2-3 လူဦးရေသန်းတိုင်းပြည်အချို့မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဇုန်နှစ်စဉ်သွားရောက်လည်ပတ်။ အများဆုံးသူတို့ထဲကများမှာသွားရောက်ကြည့်ရှု:
Odaesan ဟောင်း - (Odaesan)2အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည် သီလရှင် Woljeongsa နှင့် Sogymgang မြစ်, ကျောက်ဆောင်ကျောက်ခဲများနှင့်ချိုင့်ကဝိုင်းသော။ နှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ်စနိုးဘုတ်စီးခြင်း - နွေရာသီခရီးသွားဧည့်တောင်တက်, ဆောင်းရာသီလေ့ကျင့်ဖို့ကဒီမှာလာကြ၏။ ပန်းခြံများတွင်အားကစားများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်5ထိပ်, ရှိပါတယ်။ ဤတွင်အမျိုးသားရေး№48အောက်တွင်ဘဏ္ဍာကို (9-tier စေတီတော်) နှင့်№139 (ဗုဒ္ဓ၏ကြောကျခဲရုပ်တု) ဖြစ်ကြသည်။
Seorak (Seoraksan) - တောင်ကိုရီးယား၏အကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်, သူ့ဓါတ်ပုံအများကြီးအမှတ်တရပစ္စည်းအခုတော့ရွာသားတွေနဲ့သံလိုက်ဆင်ယင်ခြယ်သ။ 398 စတုရန်းမိုင်၏ဧရိယာတွင်။ ကီလိုမီတာဟိုတယ်များ, စခန်းချ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အားကစားဆိုင်ရှိပါတယ်။ ဤတွင်ခေထြားသောကြေးဝါချအာရှ Sinhyngsa, ဂေါတမ၏ 19 မီတာမြင့်မားသောရုပ်တုများတွင်ရှေးအကျဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း, ဖြစ်ပြီး, တောင်တက်အဘို့ထက်ပိုမို 10 လမ်းကြောင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ သူတို့ကအခက်အခဲနှင့်ကြာချိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။
Bukhansan (Bukhansan) - က Gyeonggi ပြည်နယ်တွင်အတူတူပင်ခေါင်ပေါ်တည်ရှိသည်။ အပင်နှင့်ပန်းမန်များအပင်များ, မှိုနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ 2494 မျိုးစိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအရံနယ်မြေမြို့တော်၏ဝုဏ်အတွင်းတည်ရှိပြီး, ဒါကြောင့်ဒေသခံများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည် ဆိုးလ်၏ ။ အများဆုံးကတော့ယူနစ်ဧရိယာ၌သွားရောက်လည်ပတ်အဖြစ်အမျိုးသားဥယျာဉ်မှတ်တမ်းများ၏ဂင်းနစ်စာအုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
Kayasan (ဂါယာ-san က) - ၏ကျော်ကြားဘုန်းကြီးကျောင်းသောတူညီသောအမည်, တောင်တော်န်းကျင်တွင်တည်ရှိသော Haeinsa ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်းရှိ XIII ရာစုအတွင်းလုပ်ရှေးဟောင်းကျမ်း၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့်အချို့သောစိုထိုင်းဆနဲ့အပူချိန်မှာအထူးမြေအောက်သိုလှောင်မှုမှသူတို့ကိုရွှေ့ချင်တယ်။ ပါတီမှပထမဦးဆုံးလှုပ်ရှားမှု, ချက်ချင်းဆိုးရွားစတင်ဒါစုဆောင်းခြင်းမူရင်းပုံစံ၌ကျန်ကြွင်းခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သိပ္ပံပညာရှင်များယခုတိုငျအောငျမဖွရှေငျးနိုငျသညျ။
Halla (Hallasan) - Reserve ပေါ်တွင်တည်ရှိသည် Jeju ကျွန်း နှင့်ယူနက်စကိုကကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုက်ကိုအဖြစ်စာရင်း။ ပန်းခြံများတွင်လိမ္မော်အာရှရပင်, ကျက်စားရာအရပ်, Meadows နှင့် 2950 မီတာ (တောင်ကိုရီးယားမှာအမြင့်ဆုံးအမှတ်ကို) ညီမျှသည်ထိပ်တန်းအရာ၏မီးတောင်, ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏မီးတောင်တောက်ပတဲ့အပြာရောင်ရေနှင့်အတူတစ်အိုင်ဖြစ်တယ်။ Azalea ပန်းပွင့်သည့်အခါကဒီမှာရောက်ရှိ, မေလမှဇွန်လဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
: တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းတစ်ခရီးစဉ်အတွင်းကဲ့သို့သောဤအမူထူးခြားတဲ့သဘောသဘာသိုက်, အာရုံစိုက်
ပန်းခြံ Tadohehesan - Jeollanam-do ၏ပြည်နယ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ငါး, 147 - - ငှက်, 13 - နေရေနေနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါ 11 မျိုးစိတ်ပန်းခြံအိမ်ကအင်းဆက်ပိုးမွှား၏ 885 မျိုးစိတ် 165 မှဖြစ်သောအမြဲစိမ်းသစ်တောများ, နှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။
ဂရန်းပန်းခြံ - ကဟုခေါ်သည် ဆိုးလ်က Grand Park တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်။ တစ်နှင်းဆီဥယျာဉ်ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်င်း၏ပိုင်နက်တွင်တစ်ဦးတိရစ္ဆာန်ရုံ, မော်ဒန်အနုပညာအမျိုးသားပြတိုက် , ဖျော်ဖြေရေးနှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကို တင်. နေကြသည်။
Halle ပန်းခြံ - ပန်းခြံဟာရေလမ်း Hallesudo ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာ Esu Kochzhedo ဖို့မြို့ကနေဆန့်တစ်ဦး 150 ကီလိုမီတာရေဧရိယာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တောင်တပြင်လိုဏ်ဂူနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့သဘောသဘာဝနှင့်အတူများစွာသောလူနေထိုင်မှုမရှိကျွန်းများရှိပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပန်းခြံ (Jeju Loveland) - တောင်ကိုရီးယားမှာ Jeju ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာအဝတ်အချည်းစည်းလူများ၏ပန်းပုအမျိုးမျိုးသောရင်းနှီး pose အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးထားတဲ့၏ပိုင်နက်အတွင်းတစ်မူထူးခြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးတံခါးများ, ခုံတန်းရှည်နှင့်ရေပေါက်ရေတွင်းများအမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်မှုနှင့် phalluses ၏ပုံစံအလှဆင်။ သို့တိုင်ကဒီမှာလိင်ပြတိုက်, ရေးရာကုန်သွယ်ခြင်း, ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူတစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်။ ပန်းခြံမှဝင်ပေါက် 18 နှစ်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များမှခွင့်ပြုထားပါသည်။
Woraksan - ကလှပသောရှုခင်းများကျော်ကြားသည်။ ဤတွင်မုန်တိုင်းထန်မြစ်ရေတံခွန်များဖြင့်အစားထိုးခြင်း, ကမ်းပါးအားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြလမ်းကြောင်းတောင်တက်နေကြသည်။ အဆိုပါ protected ဧရိယာ၏နယ်မြေတွင်ရှေးဟောင်းဗိမာနျတျော Tokchusa ဖြစ်ပါတယ်။
Buhasan ပန်းခြံ - ဆိုးလ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်သာယာလှပသစ်တောကဝိုင်းထားသည်။ အဆိုပါ protected ဧရိယာ၏နယ်မြေတွင်, ရှိပါတယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့်အသင်းတော်များ အဖြစ်အထူးခရီးသွားဧည့်လမ်းကြောင်း။
ပန်းပုပန်းခြံ - ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဝါရဲ့ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး။ ရုပ်ပွားတော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်လဲကြချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပြီးတော့တက်ကိုချိုးဖျက်နှင့်နာကျင်မှုခံစားရသူကိုဇာတ်ကောင်ပုံစံလုပ်နေကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထူးဆန်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ pose ရှိသည်။ တချို့ကအထိမ်းအမှတခေါ်ဆောင်သွားသဘာဝတရား၏ဖြစ်ကြသည်။ လို့ခေါ်တဲ့ပန်းခြံထဲတွင်အများဆုံးမှတ်မိရုပ်တု "လက်ကမ်းလှေကား။ "
Islan ပန်းခြံ - ၏နယ်မြေတစ်ခုလုံး ဆွဲဆောင်မှု မွှေးပန်းပွင့်နှင့်အထူးခြားဆန်းပြားအပင်နှင့်အတူစိုက်လျက်ရှိ၏။ သေးငယ်တဲ့လယ်ယာနှင့်တိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ဂီတစမ်းရေတွင်းနှင့်စေတီပုထိုးများ, တံတားများနှင့်ဆိုင်ကယ်လမ်းကြောင်းရှိပါသည်။ ကျောက်ပေါ်နေသာရက်ပေါင်းတွင်သင်မကြာခဏလိပ်နွေးရဖို့တွားတွေ့နိုင်ပါသည်။
ပန်းခြံ Seongsan - မိုဃ်းမလင်းမှီသို့မဟုတ်အရုဏ်မှာ၎င်း၏လှပမှုနှင့်အတူစိတျစှဲသောမျိုးသုဉ်းမီးတောင်။ မီးတောင်၏မီးတောင်မှတက်လေ့လာရေးပလက်ဖောင်းနှင့်ခုံတန်းရှည်တပ်ဆင်ထားအထူးလှေကားကထွက်ယူသွားတတ်၏။
Namsan ပန်းခြံ - ခရီးသွားဧည့်များ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များကိုကမ်းလှမ်းသောမျှော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကတက်, သင်ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါအရံများတွင်ခရီးသွားဧည့်အပင်အမျိုးမျိုး, အမျိုးသားကျေးရွာနှင့်တစ်ဦးရေတံခွန်နှင့်အတူလှပသောရေကန်မြင်လိမ့်မည်။
နီပေါ - Resorts
ကြောင်များအတွက် valerian သလားအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လဲ?
Swimsuit - ဘောင်းဘီတိုနှင့်တီရှပ်
ရိုင်းကြက်သွန်ဖြူ - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
အဘယ်ကြောင့်ညှပ်ဓာတ်ဆီ start မဟုတ်လော
အနီရောင် borsch ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Kaley Cuoco ကွာရှင်းပြီးနောက်မိမိအသန်းပေါင်းများစွာကိုစောင့်ရှောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲ
အိမ်မှာ Cladky ပေါက်ပေါက်
မီးဖို၌အာလူးနဲ့ယုန် - အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနှင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
ဂရိနိုင်ငံကိုချစ်မှ 49 အကြောင်းရင်းများ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ element တွေကိုခြေရာကောက်
တိုတောင်းသောလက်သည်း 2013 တွင်လက်သည်းဆိုးဆေး
Terriers - ကျောက်အမျိုးအစားများ
နာတာလီ Portman နှင့်ဗင်္ယာမိန် Millepied နမ်းဖမ်းမိ